Course Directory – Coursecom
ခဲပန်းချီ(pencil drawing) နဲ့ပတ်သက်ပြီး အခြေခံသိသင့်သော Tone, Light, Shade, Shadow အကြောင်းကို အသေးစိတ်သိရှိလာအောင်၊ ကိုယ်ဖန်တီးလိုသော ပန်းချီများကို သဘာဝကျကျဆွဲတတ်ပြီး Professional Art တစ်ခုဖန်တီးနိုင်အောင်ရည်ရွယ်၍ ယခုလို video clip များကို…
Aung Nyein Zaw
မိတ်ကပ်လိမ်းချယ်မှုများကို အခြေခံနည်းစနစ်ကျကျဘယ်လိုမျိုး လှပလာအောင် လိမ်းချယ်မလဲဆိုတာကို လေ့လာသူများအားလုံးအတွက် ယခုလို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလိမ်းချယ်နည်း Makeup Look video လေးတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မိမိတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်ဖြစ်၊ မိမိ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ Company ကိုဖြစ်ဖြစ် ဖွံဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ချင်သူတွေအနေနဲ့ သိသင့်သိထိုက်သော အကြောင်းအရာများ၊ နည်းစနစ်ကျနစွာဖြင့် လုပ်ကိုင်တတ်စေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပြောကြားထားခြင်းဖြစ်သည်။
Yin Hlaing Min
ဒီတစ်ခါ တင်ဆက်ပေးထားတဲ့ Coursecom လေး ကတော့ နည်းပညာလုပ်ငန်းစု များ စုစည်းရာ ဆီလီကွန်တောင်ကြားက စီအီးအို များ လက်စွဲထားရတဲ့ Dr. Geoffrey Moore ရဲ့ Crossing the Chasm ဆိုတဲ့…
လုပ်ငန်းမှာ “ရောင်းအား” ယခုထက်ပိုပြီး တိုးချင်ပါသလား? အရောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိုင်ဆိုင်မှုတွေများနေတဲ့ Market ထဲမှာ သင့်အနေနဲ့ရောင်းရတာလွယ်တယ်လို့ထင်ပါသလား? အပြိုင်အဆိုင်ရောင်းချနေတဲ့ ဒီနေ့ခေတ်ကြီးမှာ အရောင်းသမားတွေအနေနဲ့ အရောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လို Skills တွေ Knowledge ရှိဖို့လိုအပ်နေတာလဲ? Customer တွေကိုဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေသုံးပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Product…
Ei Mon Swe
Organizational Behaviour and Development1
Wint Zarchi Htun
May Zar Aung
Pyae Phone (GYS)